Nezvedu - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Nezvedu >
Quanzhou waimaoniu Import uye Export Corporation yakagadzwa muna 2017.06.02, iri yakazara kambani inobatanidza dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Chaizvoizvo ipa akachengeteka uye akavimbika marara ekudzivirira emasks, masiki eUK95, masks ekurapa, masks evana, masks evakuru, masks ehurumende, magirovhosi, magurovhosi egirazi, chipfeko chekudzivirira, thermometer, disinateant, sipo yemawoko, machini emachira, maski earbands, machira eMeltblown , machira ekotoni, mabhora ekotoni uye zvimwe zvinodzivirira.
Zvigadzirwa zvacho hazvisi kungotengeswa kumaguta makuru muChina, asiwo zvinotumirwa kuEurope neEast Europe, Southeast Asia, Middle East, South America, North America, Africa uye nedzimwe nyika nematunhu. Kuti tiwedzere kukwikwidza kukwikwidzana kwezvakagadzirwa uye kugara mumusika zvakanyanya, kambani yedu inomhanyisa kuiswa kwehunyanzvi hutsva, nekugadzira nesimba zvigadzirwa zvitsva, inoramba ichivandudza kunaka kwechigadzirwa, uye inoshandira kuita musanganiswa wakakwana wekuchengetedza uye kuchengetedza zvakatipoteredza. Musika-yakatenderedzwa, mutsva-musiki, mutengi kutanga, famba pamberi, uye yakajairika budiriro bhizinesi uzivi, gara uchiongorora misika mitsva kumba nekune dzimwe nyika. Shamwari shanda pamwe nevatengi vatsva uye vekare vatengi kuti vakupe iwe nehunyanzvi uye nyore masevhisi.
Chaizvoizvo ipa akachengeteka uye akavimbika marara ekudzivirira emasks, masiki eUK95, masks ekurapa, masks evana, masks evakuru, masks ehurumende, magirovhosi, magurovhosi egirazi, chipfeko chekudzivirira, thermometer, disinateant, sipo yemawoko, machini emachira, maski earbands, machira eMeltblown , mabhora ekotoni uye zvimwe zvinodzivirira.
Otomatiki mask mashini
Zvigadzirwa zvacho hazvisi kungotengeswa kumaguta makuru muChina, asiwo zvinotumirwa kuEurope neEast Europe, Southeast Asia, Middle East, South America, North America, Africa uye nedzimwe nyika nematunhu.